ကျွန်တော်ကျိန်ဆိုပါတယ်! ဒါမှမဟုတ်ငါလုပ်သင့်သလား | Martech Zone
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 27, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
Paula Mooney သည်မကြာသေးမီကရေးသားခဲ့သည် entry ကို cussing ဘလော့ဂါများအကြောင်း။ ငါထင်တာကသိချင်လို့ပါ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါအလွယ်တကူဖတ်နိုင်တဲ့နေရာကိုငါအလည်အပတ်သွားတဲ့ဘလော့ဂ်အနည်းငယ်ရှိတယ်။ အားလုံးဟာရယ်စရာကောင်းတယ်။ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ cuss သို့မဟုတ်ကျိန်ဆိုသောဘလော့ဂ်များတွင်ကျွန်တော်စွဲစွဲမြဲမြဲလိုက်လံရှာဖွေနေရသည်။ အကယ်၍ ဒေါသဖြင့်ပြောလျှင်ဒုတိယအကြိမ်လည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်လုံးဝမလာနိုင်ပါ။
သင်၏ကွန်ရက်ပေါ်ရှိသင်၏စကားလုံးများကသင်ပြောနိုင်သည်ထက်ပိုကြာနိုင်သည်။ cussing အဘို့မှတ်မိခံရဖို့ကံမကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Cussing တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမှားယွင်းစေခြင်းငှါ, cussing မည်သူမဆိုမှားယွင်းမည်မဟုတ်။
သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပါ ငါရိုးရှင်းစွာတစ်ဖြစ်လာတဲ့လား ဝမ်းရောဂါ? မှတ်စု: အဘယ်သူမျှမ cussing!
ထွက်ကြည့် Flex လာ!
27:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 38
ဤသည် effin ကောင်း! ရုံ, ဒေါက်ဂလပ်နောက်နေ။
28:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 02
ဒီ link ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ် Lifehacker ဝေါဟာရအချို့လိုအပ်နေသောသူများအတွက်ယနေ့
28:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 17
ငါနောက်သို့လိုက်သောဘလော့ဂ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောကျိန်ဆိုမှုများပါဝင်သည်။ ထိုသူသည်သူ၏စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသည့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ထိခိုက်နေပြီး၎င်းသည်သူ၏ခံစားချက်များကိုအမှန်တကယ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူသည်စက်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သောဆက်နွယ်သောရေးသားချက်များတွင်ကျိန်ဆိုနေပုံရသည်။ သူ၏ဘာသာစကားသည်သင့်တော်သည်ဟုမထင်ပါကသူ၏ခံစားချက်များနာကျင်နေကြောင်းထင်ရှားသည်။ ၎င်းကိုသူရွေးချယ်သောဘာသာစကားမှရွေးနိုင်သည်။
28:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 43
Cussing ဟာကျွန်တော့်အတွက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ငါဟာငါ့ရဲ့နေ့တွေမှာဆပ်ပြာနဲ့ပြည့်နေတဲ့လျှာစကားလုံးတွေ၊ စကားလုံးတွေသုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေပိုများများမြင်နေရတယ်။ သူတို့ထင်တာကသူတို့ကိုအေးအေးဆေးဆေးကြည့်လို့ရစေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်လူတွေထင်တာကိုမစိုးရိမ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လွတ်လပ်မှုရှိရမယ်။ လူအများစုကမင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ဘလော့ဂ်တွင်ကျိန်စာစကားများအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီး။ မရပါက၎င်းတို့သည်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလိုသည်ထက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ပိုမိုကြာရှည်လိမ့်မည်။
28:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 04
အလယ်အလတ်နဲ့ကျိန်ဆိုတာကအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ် အကယ်၍ အခြားတင်ပို့ချက်တိုင်းသည်ကျိန်ဆိုသောစကားများပြောခြင်းမဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သည်စာမဖတ်တော့ပါ။
29:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 00
ဆွေးနွေးမှုစတင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကြားတာ၊ ဖတ်တာကိုဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ပိုမိုဒေါသအမျက်ထွက်သောနည်းများရှိသည်မှာသေချာသည်။ တစ်ချိန်ကဖတ်ခဲ့တဲ့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကိုငါဖတ်နေရင်အဲဒါကိုပြန်မလာအောင်ငါတားဆီးလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာပါကထို site ကိုငါရှောင်ရှားလိမ့်မည်။
29:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 33
29:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 52
Sterling, ငါအထူးသက်ရောက်မှုများအတွက်ကျိန်ဆိုစကားလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငါတို့၏ဘာသာစကားသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်ကောင်းနည်းနည်းသာပြသထားတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါကျိန်ဆိုဖို့ 'ဆီလျော်တဲ့' နည်းလမ်းမရှိဘူး။ လူတွေဟာသူတို့လိုသာမန်စကားလုံးအချို့ကိုသုံးလေ့ရှိတယ်နေ့တိုင်းစကားလုံးများ (လူငယ်များအတွက်ထိုနည်းတူဖြစ်လာသည်) ကြားရတာကစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
29:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 00
ဤစကားများသည်အဘယ်ကြောင့်စော်ကားရသနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က Saxon ဒါမှမဟုတ် Celtic ဘာသာစကားတွေကဆင်းသက်လာလို့ပဲ။ ငါက "copulate!" ဟုပြောပါက သို့မဟုတ် "အသရေဖျက်မှု!" ဘယ်သူမှစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူး နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်လူမျိုးရေးစိတ်စွန်းကွက်မျှသာဖြစ်ပြီးထောင်စုနှစ်တစ်ခုအထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
30:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 09
ငါတစ်ခါတစ်ရံတွင် cuss, ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာလုပ်ဖို့ဂရုမစိုက်ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောကောင်လေးအနားအနားတဝိုက် macho ruff များအတွက်, ငါအများကြီးကျိန်ဆိုကြဘူး။ ငါမကြာသေးမီက Baltimore ရှိ vern ည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မင်းသမီး ၂ ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အလွန်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။ ငါမှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်။ ငါ Paula ရဲ့အမြော်အမြင်နှင့်ရိုးသားမှုကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသည်။ Paula ကမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြောရင်မင်းအဲဒီမှာရှိတယ်
30:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 21
JD, ကျွန်မခင်ပွန်းကဒီလိုစကားပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြားတဲ့အခါသူကသူမရဲ့အသံကို aw လိုမျိုးလုပ်တယ်။ ဒါဟာငါနဲ့စကားပြောဖို့သိပ်ခက်တယ်၊ မင်းဒါကိုလုပ်စရာမလိုဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဒီနေ့လူအများကြားမှာ 'လမ်းကြောင်း' ဖြစ်နေပုံရတယ်၊ အဲဒါကသူတို့ကိုနည်းနည်းပဲကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။
31:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 36
30:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 36
ငါ 99% ကျိန်ဆဲလုံးဝမလိုအပ်သောကြောင်းအချိန်သဘောတူသည်။ သို့သော်တစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ခံစားချက်ကိုဖော်ပြရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည့်သာဓကအချို့ရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ကျိန်ဆဲအစဉ်အမြဲမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကကိုလည်းပယ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ